abaphakeli be-flat die pellet mill nabathengisi ngamanani afakiwe flat die pellet mill youtube
isigayo se-pellet mill sincane ngosayizi, ukwakheka nesakhiwo sokwenza ama-pellets okuphakela kanye ne-pellets zokhuni. Kuyinto esebenza ngogesi isigaxa se-pellet nge 200 mm ubukhulu kufa, izimbobo zokufa zingaba zinhle kakhulu ngosayizi ongathanda. Ungazisebenzisa ukucubungula imfucuza ehlukahlukene yezolimo nehlathi, efana sawdust, ukolweni, utshani, irayisi husk, igobolondo le-kernel yesundu nokunye ukungcola okuningi ku-pellets. Umsindo ophansi, ukusebenza kahle kakhulu nokuguquguquka okuphezulu, lo mshini uwumshini wakho ofanele we-pelletizing.Flat die iyingxenye ebaluleke kakhulu yegreythi yokufa ye-pellet efektri encane yokukhiqiza i-pellet. I-Flat die pellet mill ixhomeke kuflethi efiphala ukukhiqiza ama-pellets avela ezintweni ezahlukene zokusetshenziswa ezingavuthiwe. Izinto zokusetshenziswa ezahlukahlukene zinezindawo ezihlukene zokuxhuma kanti izinhlobo ezahlukene zamaphinifa kudingeka zibe ezomuntu ohlukene ngokwemisebenzi yazo. Ngokwesibonelo, ama-pellets okondla kwezilwane akunzima njengama-pellets kawoyela. Ngakho-ke izinhlobo ezahlukahlukene zama-pellets nezinto ezihlukile zokwenziwa ezingafani zokwenziwa kwama-pellets zidinga isikhunta esingafani nobumba. Iphakeme isilinganiso sokucindezelwa, okuxubile pellets kukhiqizwa. Kodwa-ke uma isilinganiso sokucindezela siphezulu kakhulu, okuqukethwe kungavimba ukufa. Lokho kusho, uma ufuna ukwenza ama-pellets asezingeni eliphakeme, udinga ukusebenzisa iflethi efanelekile nge-compression ratio enhle ngokusho kwento yakho eluhlaza.
Izici ze-Flat Die Pellet Mill
1. I-Electric flat die pellet mill iqhutshwa yi-motor kagesi eyenza ikwazi ukonga amandla futhi ibe nobungani bemvelo.
2. I-Roller ne-flat die zenziwe ngezinto eziqondile zensimbi ye-alloy eyenza le ngxenye ebalulekile igqoke futhi kungabi lula ukuyaphula, ngaphandle kwalokho, izinhlangothi zombili zingasebenzisa i-flat die, ngaleyo ndlela ube nempilo ende yenkonzo.
3. Umshini wePellet wamukela ama-roller amabili noma amathathu ,ukusebenza kahle kakhulu, usayizi we-pellet ofanayo.
4. Uhlobo oluhlukanisayo olusheshe luhlukanise uhlobo lokufa olusakazwa ngokunembile luthathwa ukuze luxhume i-die and quill flange, ukwazi ukuguqula ama-die new rolling ngokushesha futhi ngokuvumayo ngokwezidingo zakho.
5. Ukubonakala. Kungenzeka ubuke egumbini lapho u-pelletizing, ukuze ukwazi ukuxazulula inkinga ngesikhathi.
6. Usayizi omncane & isisindo esenza ukuthi isetshenziswe kabanzi ekhaya, ipulazi elincane.
7. Ukulungele ukuthola impahla eluhlaza, efana sawdust, izinkuni chip, igobolondo lamantongomane, utshani bukakolweni, ukotini, ibhali, igatsha, irayisi husk, ukhula lwenhlamvu yelanga, igobolondo le-kernel yesundu nezinye izinto eziningi.
8. Kufanelekile ukwenza kokubili ama-pellets okuphakelayo nama-pellets enkuni.
Izinto eziwumbala zokugaya amaflethi afayo:
Ama-chip chips, sawdust, Isiqu sommbila, amagobolondo amantongomane, utshani belayisi, utshani bukakolweni, imfucumfucu yoqalo, isikhwama, utshani, alfalfa, switch utshani, irayisi husk, amakhekhe kawoyela, njll.